မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၁)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် မထင်မှတ်ထားတဲ့လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ – Cele Top Stars
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၁)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် မထင်မှတ်ထားတဲ့လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၁)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် မြန်မာငွေ ဆယ်သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ TV ကြီးတ လုံးကို လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ညီနန္ဒရဲ့အကြောင်းလေးကို cele top stars ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ညီနန္ဒ ကတော့ တစ်ချိန်က တီဗီကြော်ငြာတွေနဲ့ ဗီစီဒီသီချင်းခွေတွေမှာ အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ညီနန္ဒက လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ဖက် ညီတဲ့ ဇာတ်ကောင် တွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပြီး အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းပီသစွာနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စေတနာကောင်းပြီး စိတ်ထား ပြည့်ဝတဲ့ ညီနန္ဒရဲ့ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းလေးကလည်း အခုဆိုင် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုလို့ အောင်မြင်လာခဲ့တာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စေတနာအကျိုးပေးလွန်းတဲ့ ညီနန္ဒက ဒီကနေ့မှ ာလည်း (၁၁) နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ လုံးဝမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းကို “နောက်ထပ် လက်ဆောင် တစ်ခု… (Samsung 65″ Crystal UHD 2020) ကျွန်တော်တို့မ ဂ်လာသက်တမ်း(၁၁)နှစ်ပြည့်အတွက် မနေ့က အိမ်ကိုလာပို့တော့ လုံးဝမယုံဘူး။
အိမ်မှားပြီးလာပို့တယ်လို့ပဲထင်တာ။ အစ်ကိုနဲ့အစ်မ ကို ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ အစ်ကို နဲ့ အစ်မ ရဲ့စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကြိုးစားအား ထုတ်သွားပါ့မယ် လို့ဂတိပေးပါတယ် ခင်ဗျာ…” ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက တန်ဖိုးကြီး တီဗီတစ်လုံး လက်ဆောင်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ညီနန္ဒကတော့ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝသူပီပီ မိတ်ဆွေတွေ ဆီကလည်း မေတ္တာလက်ဆောင်တွေကို မကြာခဏရရှိလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း စေတနာအကျိုးပေးလွန်းတဲ့ ညီနန္ဒတို့ ဇနီးမောင်နှံကို အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။
မဂၤလာသက္တမ္း (၁၁)ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရအျဖစ္ ျမန္မာေငြ ဆယ္သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ TV ႀကီးတလုံးကို လက္ေဆာင္ရလိုက္တဲ့ ညီနႏၵ…. (အမိုက္စားႀကီးပါလား….)
သ႐ုပ္ေဆာင္ ညီနႏၵ ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္က တီဗီေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ ဗီစီဒီသီခ်င္းေခြေတြမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီနႏၵက လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ့အသက္အရြယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္ ညီတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ ေတြမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္းပီသစြာနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေစတနာေကာင္းၿပီး စိတ္ထား ျပည့္ဝတဲ့ ညီနႏၵရဲ့ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းေလးကလည္း အခုဆိုင္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုလို႔ ေအာင္ျမင္လာခဲ့တာကို ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေစတနာအက်ိဳးေပးလြန္းတဲ့ ညီနႏၵက ဒီကေန႔မွ ာလည္း (၁၁) ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ လုံးဝမယုံနိုင္စရာေကာင္းတဲ့ လက္ေဆာင္တစ္ခုရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို “ေနာက္ထပ္ လက္ေဆာင္တစ္ခု… (Samsung 65″ Crystal UHD 2020) ကၽြန္ေတာ္တို႔မဂ္လာသက္တမ္း(၁၁)ႏွစ္ျပည့္အတြက္ မေန႔က အိမ္ကိုလာပို႔ေတာ့ လုံးဝမယုံဘူး။
အိမ္မွားၿပီးလာပို႔တယ္လို႔ပဲထင္တာ။ အစ္ကိုနဲ႔အစ္မ ကို ဘယ္လိုေက်းဇူးတင္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး။ အစ္ကို နဲ႔ အစ္မ ရဲ့ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားအား ထုတ္သြားပါ့မယ္လို႔ဂတိေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…” ဆိုၿပီး မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီက တန္ဖိုးႀကီး တီဗီတစ္လုံး လက္ေဆာင္ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ညီနႏၵကေတာ့ စိတ္သေဘာထားျပည့္ဝသူပီပီ မိတ္ေဆြေတြ ဆီကလည္း ေမတၱာလက္ေဆာင္ေတြကို မၾကာခဏရရွိေလ့ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေစတနာအက်ိဳးေပးလြန္းတဲ့ ညီနႏၵတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို အားက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
အဖေနဲ့ အမေ မှာဘယ်သူက ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြလာတဲ့သက်ရတနာကျော်ဝင်း